Qarax burburiyay 'bakhaarkii hubka ee Xisbullaahi' | Somalia News
Qarax burburiyay 'bakhaarkii hubka ee Xisbullaahi'
Qarax xooggan oo ka dhacay koonfurta Lubnaan ayaa burburiyay bakhaarkii hubka ee ururka Xisbullaahi, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan laamaha amniga.
Qiiq uuro madow ayaa qabsaday deegaanka Ain Qana oo ah goobta uu qaraxa ka dhacay, halkaas oo ay ku xooggan yihiin maleeshiyaadka Shiicada ah.
Waxaana goobta gaaray gawaarida gurmadka deg deg ah, warar aanan la xaqiijin ayaa sheegayaa in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa ayaa ka dhashay cilad farsamo oo taagneyd, sida ay sheegayaan ilo wareedyo dhanka ammaanka ah.
Inkasta oo warbaahinta dowladda ay sheegtay ‘in qarax uu kusoo aaday xilli hawada ay marayeen diyaarado ay leedahay Israa’iil’
Militariga Israa’iil kama aysan hadlin dhacdadan.
Militariga Lubnaan waxay sheegeen in qaraxa uu ka dhacay deegaanka Ain Qana.
“Durbadiiba, ciidamada waxay gaareen goobta, waxayna bilaabeen baaritaan ku aadan waxa dhaliyay qaraxa”
Mana jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca Xisbullaah oo ku saabsan dhacdadan balse telefishinkooda Al Manar ayaa baahiyay in qaraxa uu ka dhacay guri ku yaalla Ain Qana balse aan la ogeyn waxa dhaliyay, wuxuu intaa ku daray in uusan jirin khasaare ka dhashay qaraxa.
Wargeyska Wall Street Journal ayaa sarkaal la hadlay warbaahinta Xisbullaah kasoo xigtay in qaraxa uu ka dhacay halkii lagu keydiyay haraagii hubka kaddib dagaalkii Israa’iil iyo Xisbullaah dhexmaray sanadkii 2006-dii.
Sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warramay in dagaalyahano ka tirsan Xisbullaah ay la wareegeen goobta.
Qaraxan ayaa kusoo beegmayaa xilli Lubnaan ay kasoo kabsaneyso qaraxii ka dhacay Beyrut oo ay ku dhinteen ku dhawaad 200 qof.
Qaraxaas oo ilaa haatan la baaraya ayaa ka dhashay 2,750 oo maaddada ammonium nitrate oo lagu keydiyay dekedda Beyrut.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54260968original article
Previous articleBarcelona Oo Lagu Waramayo In Ay Ku Guuleysteen Badelka Semedo , Horyaalka Ingiriiska Ayay Ka Heleen.